Njem sitere na ihe nkiri Black Panther
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa » Njem sitere na ihe nkiri Black Panther
Akụkọ na -agbasa ozi Argentina • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Akụkọ South Korea na -agbasa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zambia
Kemgbe mmalite ya na February 2018, Black Panther emewo ka ndị mmadụ nwee mmasị na ụwa niile. Ngwakọta nke ọdịbendị ọdịbendị nke Africa n'ezie na nkà na ụzụ ọdịnihu ga-emepụta ụwa dị ịrịba ama nke Wakanda.
A na-etinye ihe nkiri a na akụkọ ifo dị na East Africa. A na-enye ya ezigbo mmetụta site n'iji Xhosa, asụsụ Bantu nwere mkpụrụedemede pịa nke bụ otu n'ime asụsụ ndị isi South Africa na Zimbabwe.
Edere akụkụ nke ihe nkiri a n'ebe ndị dị egwu n'Africa, dị ka Cape Town, Zambia, na Uganda, e mere ya iji gosipụta ógbè ndị Africa, mana a na-ese ọtụtụ ihe nkiri na ebe ndị ọzọ n'ụwa niile-- gụnyere Busan, South Korea, Atlanta, Georgia na Iguazau Falls, Argentina.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọmarịcha ebe ndị sitere n'ike mmụọ nsọ Wakanda, nke a bụ ebe ị ga-aga na ihe ị ga-eme iji hụ ụwa Black Panther:
Gaa South Africa wee hụ ụfọdụ nlegharị anya nke kpaliri Wakanda. Nwere ike ịdọrọ n'ụsọ osimiri ma ọ bụ zuru ike n'otu n'ime ọdọ mmiri okike ndị gbasasịrị na Cape Town. Mee oge maka ụfọdụ njem njem na Table Mountain National Park, na ịgagharị site na Kirstenbosch National Botanical Garden nke na-emeri emeri. Ọ bụrụ na ị na-achọ ahụmihe miri emi, nọrọ na Shamwari Game Reserve ma hụ ọmarịcha ihe egwu dị egwu nke Reserve na-arụ ọrụ siri ike ichebe.
Ihe ngosi ikuku ndị ahụ dị na Black Panther ga-esi ebe, ma ọ dabara nke ọma ị nwere ike ịga leta ugwu ndị mara mma eji eme ihe nkiri na mmadụ. Were Safari ma ọ bụ gaa ozodimgba na-ahụ site n'Ugwu Rwenzori, ma ọ bụ gaa nnụnụ na-ekiri na oke ọhịa mmiri kachasị ochie n'Africa, Bwindi Impenetrable National Park. Tupu ị pụọ, gbaa mbọ hụ hụ olulu mmiri ọhịa na "agwaetiti nke mbara igwe" Virunga Volcanoes.
Ihe omuma atu ozo zuru oke nke ebe ndi njem nlere na-ele anya Black Panther na-eme njem bu Zambia. A na-egwu mmiri Victoria Falls, nke a maara dị ka nsụda mmiri kacha ukwuu n'ụwa, nwere oghere igwu mmiri ebe ndị ọbịa nwere ike ịmị ma rie echiche ndị ị na-agaghị ahụ ebe ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụ azụ, nọrọ otu ụbọchị na Lake Tanganyika na ị nwere ike ịpụtụ ma na-ekiri ihe na-ekiri. Enwere ọtụtụ ogige ntụrụndụ steeti na ebe ị nwere ike ịga ịga jikọọ na anụ ọhịa, dị ka Nyika National Park.
Ebe a dị ezigbo iche na ebe ndị ọzọ Black Panther sitere n'ike mmụọ nsọ na ndepụta a, mana na-enye ahụmịhe ịtụnanya. Pinewood Studios bụ ebe etinyere ọtụtụ ihe anwansi nke Black akukonta. Nwere ike ịgagharị na ụlọ ọrụ ahụ tupu ị gaa The High Museum of Art nke okpukpu abụọ dị ka Museum of Great Britain na fim ahụ. Ya mere ọ bụrụ na Great Britain dị ntakịrị tere aka, gaa na Atlanta! N'okpuru n'okporo ámá site na ihe ngosi nka, ị nwere ike ịkwụsị site na Rose + Rye maka mbinye aka na mmanya n'otu n'ime ọtụtụ ogige ha mara mma.
Youchọghị ka ị ga - eleta ọmarịcha Warrior Falls nke na - asọba na Black Panther? Can nwere ike, n'ihi na a na-ese ihe nkiri nke ọdịda ahụ na Iguazu Falls na Argentina. Nwere ike ide akwụkwọ Airbnbs pụrụ iche na mpaghara Iguazu na hammocks na oghere mepere emepe ihe na-erughị $ 70 kwa abalị, na-eme ka ọ dị ọnụ ala ileta ebe a. Mgbe ị ruru ebe ahụ, ịnwere ike ịnyagharị ụgbọ ịnyịnya na-agagharị n'oké ọhịa, njem ọsọ ọsọ n'oké mmiri ozuzo, wee banye ụgbọ mmiri jet nke ga-eduru gị gaa "akpịrị Ekwensu," nke kachasị elu na mmiri mmiri Iguazu.
N’ụzọ na-eju anya, ụfọdụ ihe nkiri si n’ihe nkiri a gbagburu na Busan, South Korea nke ghọrọ ebe njem na-enwete ebe emechara Olimpik Oge Oyi n’ebe ahụ n’afọ a. Azụ Ahịa Jagalchi, Gwangalli Beach, Yeongdo Island, na Sajik Baseball Stadium bụ ụfọdụ n'ime ebe eji eme ihe nkiri. Osimiri Gwangalli na-adọta ndị njem nleta n'ihi mmiri ya dị mma na ezigbo aja. Ọ bụrụ n’ị gaa n’àgwàetiti Yeongdo, ị nwere ike ịga n’ebe a na-ekwo ekwo ekiri na Busan Tower ma were anya abalị na-atọ ụtọ nke ndị njem nleta na ndị obodo hụrụ n’anya.